इमोजिस कसरी मार्केटिंगमा प्रयोग भइरहेको छ
सोमबार, अगस्ट 8, 2016 शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० Douglas Karr
मलाई थाहा छ मैले प्रयोग गरें? शीर्षकमा, तर मेरो मतलब के हो? व्यक्तिगत रूपमा, म इमोजिसको प्रयोगमा बेचिएको छैन (भावनात्मकको ग्राफिकल प्रतिनिधित्व)। ब्यापार संचारको क्षेत्र मा, मँ कहीं ईमोजिस फेला पार्छु सर्टकट सर्टकट र cussing बीचमा। व्यक्तिगत रूपमा, म तिनीहरूलाई वास्तवमै व्यंग्यात्मक फेसबुक टिप्पणीको अन्तमा प्रयोग गर्न मनपराउँदछु, व्यक्तिलाई थाहा दिनको लागि म उनीहरूलाई अनुहारमा मुक्का नदेखाऊ। ?
इमोजी भनेको के हो?
इमोजी एक सानो डिजिटल छवि वा आइकन हो जुन इलेक्ट्रॉनिक सञ्चारमा एक विचार वा भावना व्यक्त गर्न प्रयोग गरिन्छ। इमोजी शब्द जापानीबाट लिइएको हो, रeबाट आउँदछ तस्वीर + मोजी अक्षर वा चरित्र.
त्यसोभए इमोटिकन के हो?
इमोटिकन कुञ्जीपाटी क्यारेक्टरहरू द्वारा बनेको अनुहारको अभिव्यक्ति हो, जस्तै;), जहाँ इमोजी हुन्छ?
इमोजीहरू दैनिक मानव भाषाको अंश भएको छ। वास्तवमा, २०१ogi इमोजी रिपोर्ट इमोजी रिसर्चले पत्ता लगायो कि online २% अनलाइन जनसंख्याले इमोजीहरू प्रयोग गर्दछ, र %० %ले भने कि इमोजीहरूले उनीहरूलाई आफ्ना भावनाहरू अझ प्रभावकारिताका साथ अभिव्यक्त गर्न सकिए २०१ 2015 मा, अक्सफोर्ड शब्दकोश ईमोजी पनि बर्षको शब्दको रूपमा छनौट गरे ?
तर ती केही बजारहरूले प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्! वास्तवमा, ब्रान्डले २०१ 777 को जनवरीदेखि इमोजीको उपयोग 2015 XNUMX% ले वृद्धि गर्यो।
सिग्नल बाट यो इन्फोग्राफिक प्रयोग को धेरै उदाहरणहरु मा हिंड्दछ। बड लाइट, स्याडेडे नाइट लाइभ, बर्गर कि,, डोमिनोज्स, म्याकडोनाल्ड र टाको बेलले इमोजिसलाई उनीहरूको मार्केटिंग संचारमा समाहित गरेका छन्। र यो काम गर्दैछ! इमोजी-सक्षम विज्ञापनहरू क्लिक-थ्रु रेटहरू उत्पन्न गर्दछन् जुन २००० इंडस्ट्री मानक भन्दा उच्च छ
सिग्नलले इमोजिसको साथ केही चुनौतीहरूको विवरण पनि दिन्छ। तल इन्फोग्राफिक जाँच गर्नुहोस्! ?
टैग: बड लाइटबर्गर किङ्गडोमिनोजइमोजीइमोजी मार्केटिंगभावनात्मकम्याकडोनाल्ड गरेकोशनिबार राती लाइभसंकेतहँसिलो अनुहारटेको बेल
डोमेन डिस्कवरी: डोमेन सम्पत्तिहरूको इन्टरप्राइज व्यवस्थापन